Phakathi nenqubo yokulethwa, izinguquko ezibalulekile ngokomzimba nangokwengqondo-ngokomzwelo zenzeka emzimbeni wesifazane. Ukuzalwa kuqala ngokuvulwa komlomo wesibeletho futhi kuphele ngokuxoshwa kwe-placenta. Ngesikhathi sokubeletha, izikhathi ezintathu zivelele. Kulo wesifazane ngamunye baqhubeka ngendlela yabo, futhi isikhathi ngasinye sahluka ngokuphawulekayo hhayi kuphela phakathi kwama-parturient ahlukene, kodwa futhi nokuzalwa okuhlukile kowesifazane oyedwa. Okungaphezulu ngalesi sikhathi empilweni yonina umama ozayo uzofunda esihlokweni esihlokweni esithi "Lokho owesifazane akuzwa lapho ukuzalwa kuqala".
Esigabeni sokuqala sokusebenza, umlomo wesibeletho uvuliwe ngokugcwele, unikeze ithuba lokudluliswa komntwana nge-canal yokuzalwa. Kulo lonke ukukhulelwa, umlomo wesibeletho wenza umsebenzi obalulekile wokuvikela ngenkathi ubambe isisu esiswini. Emahoreni wokuzalwa kokuqala, izinguquko zendima yayo - liphenduka ibe isiteshi esikhulu esiphelele, sikhonze ukukhulula isisu kusuka emgodini wokuzalwa. Lolu shintsho lugcwaliswa ngesikhathi lapho izibeletho zesisu ziguqula umlingiswa wazo: izimpi ezikhuthaza ukuvulwa komlomo wesibeletho, zithathwe yizame ezihlose ukuxosha ingane. Phakathi nalesi sikhathi owesifazane uvame ukubhekana nezinguquko ezibalulekile zomzimba nezingokomzwelo. Iziphazamiso zesisu ziba namandla kakhulu futhi zivame - ngezinye izikhathi zilandelana, zingashiyi isikhathi sokuphumula. Zingahambisana nokuthuthumela, isifo sohudo noma ngisho nokuhlanza.
Izinguquko ezingokomzwelo ezenzeka phakathi nale nkathi zingabonakaliswa ukuziphatha okungavamile kowesifazane - isibonelo, ukwanda okukhulu noma ukuguquka. Ngokuvamile lapho ebeletha, ubonisa intukuthelo kumlingani wakhe, emangalela ngobuhlungu obhekene naye. Ngezinye izikhathi owesifazane obeletha kubonakala sengathi ucabanga ukuthi kwenzekani ngaphezu kwamandla akhe, futhi akasafuni le ngane, abanye bangasoze bakholelwa ukuthi bangakwazi ukumemeza ngaleyo ndlela.
Isikhathi sesibili sokusebenza - isikhathi sokuxoshwa kwe-fetus - siqala ngokuvulwa komlomo wesibeletho futhi siphela ngokubonakala komntwana. Isibeletho siyixosha. Abesifazane abaningi abaqapheli ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani, futhi kuba okungalindelekile kubo ukuthi ukuxoshwa kwe-fetus kuyisenzo esiyingqayizivele esibangelwa ukuphazamiseka okungazibandakanyi kwesibeletho, inqubo engakwazi ukumiswa. Ngesikhathi sokuphuma kwekhanda le-fetal kusuka ekuvuleni kwangaphandle kwesifazane, owesifazane angase azizwe ebuhlungu obuvuthayo (ngezinye izikhathi afaniswa nokushisa kwenetha). Abanye besifazane abakhathazekile bazama ukuthinta ikhanda ngalesi sikhathi, bemukela ukubukeka kwengane emhlabeni. Kuwesifazane osanda kubeletha ingane abelethile, ukukhiqizwa kokuzalwa kokuzalwa, okuyisikhathi sokugcina sokubeletha, ngokuvamile kudlula njengenkungu - usevele engazi kahle ukuthi kwenzekani enjabulweni yakhe nokuthokoza kwakhe. Lapho nje ingane isezandleni zomama, ibona injabulo nokukhululeka. Izinyanga eziyisishiyagalolunye zokukhulelwa zaphela ngokujabula, ngemuva kobuhlungu bokubeletha, umntwana usaphila futhi kahle. Kulo mzuzu kubalulekile ukunikeza abazali ithuba lokuba yedwa nengane - kuba ngalesi sikhathi ukuthi uxhumano lomzwelo phakathi kwabo nomntwana luqala ukubekwa.
Abaningi besifazane bazwa ubuhlungu obunzima phakathi nokubeletha, futhi ukwesaba lobu buhlungu kungenye yezinto ezibalulekile ekulindeni ukubeletha. Kodwa-ke, engxenyeni ebalulekile yamacala, ubuhlungu buwumphumela wombono owenziwe emasikweni ethu okuthumela kufanele kube buhlungu. Umphumela uyimbuthano enonya - ukwesaba kuholela ekuhlukunyezweni nasebuhlungu, okwenza ukwesaba okukhulu nokucindezeleka, ubuhlungu obunzima. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ubuhlungu ngesikhathi sokubeletha akuwona uphawu lwezinkathazo - kuyinto evamile futhi engokwenyama. Isibeletho akusona umthombo osheshayo wobuhlungu. Ihlanganiswa nokunikezwa kwegazi okwanele ezicukwaneni zesisu esiswini ngesikhathi sokuqokwa kwesibeletho. Kucatshangwa ukuthi lokhu kubuhlungu kuyisignali ebuchosheni, ukuphoqelela owesifazane ukuba enze ukunyakaza okudingekile ekulethwa kwempumelelo. Ukukhumbula ukuzalwa njengenqubo ebuhlungu kakhulu, abesifazane abaningi, noma kunjalo, bakholelwa ukuthi injabulo ekulindelekile imnika amandla okubhekana nakho-ukubukeka kwengane. Owesifazane obeletha okokuqala akanalo indawo yokuthola umqondo wokuthi uzobhekana kanjani nokubeletha, ngakho-ke ezimweni ezinjalo, umuntu kufanele akhumbule ukuthi kungenzeka ukuthi anesthesia futhi ulungele ngesikhathi esifanele ukuyisebenzisa. Abazali besikhathi esizayo kufanele bazi futhi ukuthi ukuzalwa okungaba ngu-20% kuphelile ngesigaba se-cearean. Ngemuva kwalokho, owesifazane angazizwa "ekhohlisiwe" ngoba akudingeki ahambe nenqubo yemvelo yokubeletha.
Uma ubaba ekhona ngenkathi ebeletha, ivame ukubamba indima ebaluleke kakhulu - ukuqinisekisa induduzo enkulu kumama wesikhathi esizayo, ukumsekela endaweni edingekayo, ukondla amanzi okuphuza nokunikeza ukusekelwa ngokomzwelo. Ubaba angavunyelwa ukuthatha ingane kuqala lapho ephuma emgodini wokuzalwa futhi enqume umthamo womzimba. Nakuba kungekudala, omama nabasebenzi bezokwelapha bezama ukugqugquzela ubaba ukuba babambe iqhaza ekubelethweni, amadoda amaningi azizwa engadingekile ngempela, lapho le nqubo ebalulekile, okuyizinga elithile elibandakanyekayo, ifinyelela ku-apogee yayo. Kwabanye, kubonakala sengathi bayanakwa noma "baxoshwa", begxila bonke umama ozayo. Umuntu angazizwa enqatshelwe uma owesifazane, ngenxa yobunzima phakathi nokulwa, aziphatha ngendlela engafanele.
Isimo sengqondo ngomntwana
Ukuphendula kwabazali lapho bebona umntwana osanda kuzalwa kungahlukana nezinyembezi zenjabulo nokubonakaliswa okusheshayo kokubanjwa ukuze kuthume noma kuthule ngemva kokukhathala okukhulu. Abanye abazali bazizwa bekhululekile ngokuthi yonke into iyathokoza, nokuziqhenya kokufezeka, kodwa kubonisa ukungakhathazeki okungaqondakali kwengane. Mhlawumbe bazodinga isikhathi sokujwayela ingane esanda kuzalwa. Ingane ekubelethweni ingase ibonakale encane kakhulu, inenhloko ekhululekile, isikhumba sakhe sigcwele umuthi omhlophe ofana ne-grease-okuthiwa i-grease yangempela. Kusukela ezinsukwini zokuqala zokunakekela umntwana osanda kuzalwa, abazali bazobona ukuthi uyaphendula amazwi abo, futhi uthando lwakhe luyokhula. Ngokuzalwa komntwana wokuqala, impilo yomama nobaba osanda kumiswa ingena esigabeni esisha. Manje siyazi ukuthi lo wesifazane uzizwa kanjani lapho kuzalwa ukuqala.
Igazi legazi: amacala okusetshenziswa
Ngifuna ukuba nomntwana, kodwa angikwazi
Ukuzalwa kokuqala kuhluke okwesibini
Indlela yokususa isisindo esiningi ngemva kokubeletha
Imithetho yobuhle i-Audrey Tautou: njengokuba njalo uhlale uhlelekile futhi uhlelekile
Kudla ngohlobo lwesibalo
Ababhalisile be-Alena Vodonaev baxubene noBuzovoy
UVgeny Tsyganov waba nguyise okwesikhombisa
Ukuzihlalisa nini futhi kanjani ukusabalalisa usana olusanda kuzalwa
Isaladi nelayisi nezinhlanzi
Ukungabi nobisi ngemuva kokubeletha
Iphutha: Iviki Elingcwele ngaphambi kwePhasika
Izakhiwo eziwusizo ze-burger
Indlela yokutshala imifino efasiteleni